သင့်ရဲ့ Apple Watch ကိုဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးနဲ့ရယ်စရာကောင်းသောဈေးနှုန်းဖြင့်ကာကွယ်ပါ ငါက Mac ကပါ
သင့်ရဲ့ Apple Watch ကိုကြီးကျယ်တဲ့အမှုတစ်ခုနှင့်အတူကာကွယ်ပါ
အသုံးချ | | ပစ္စည်းများ, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, NOTICIAS
အခုငါတို့ရှိသည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း၏အံ့သြဖွယ်စွန့်စားမှုကစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ဦး စွာစဉ်းစားရန်စိတ်သဘောထားရှိသော်လည်း၎င်းသည်မလွှဲမရှောင်သောပွတ်တိုက်မှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ခြစ်ရာခံရသည့်ကိစ္စဖြစ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်ဖုံးအုပ်ထားသည့်မြောက်မြားစွာကိုထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။ အများစုမှာအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖုံးကိုငါယူလာပေးပြီ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ပထမတစ်ခုက၎င်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးနောက်ဒုတိယတစ်ခုမှာသတိမပြုမိဘဲသွားစေသည်။ ဒါ့အပြင်သင့်မှာနှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားနိုင်တဲ့စျေးနှုန်းချိုသာပါတယ်။
1 သင်၏ Apple Watch အတွက်အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်
သင်၏ Apple Watch အတွက်အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်
သင့်မှာအိမ်ရှိပြီးသားဆိုလျှင် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဒါကိုဂရုစိုက်ပြီးကာကွယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးပါသည်၊ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏သွေးထဲသို့ Apple သုံးစွဲသူအားလုံးသယ်ဆောင်သွားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ငါနာရီကိုမှာလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကာကွယ်ရန်တစ်ခုခုရှာပြီး စတင်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော TPU အိတ်တစ်လုံးဝယ်လိုက်သည်။ အမှား! ဒါဟာငါ့အပေါ်မှာတင်သောကြာခဲ့သည် 38mm Apple Watch Sport ကိုယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးကဖယ်ရှားပစ်ရန်ငါ့ကိုယူသကဲ့သို့။ ဒါဟာအများကြီးအများကြီးပြသနှင့်လက်ပတ်နာရီ၏ဒီဇိုင်းကိုဖဲ့။ ပြီးတော့အားလုံးကိုထိပ်ဆုံးကနေအရမ်းဈေးပေါပေမဲ့ငါမင်းကိုပြတော့မယ်။ ငါ့ကိုဒီထက်ပိုကုန်ကျခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ်အိတ်တစ်လုံးဝယ်သောအခါ အိုင်ပက် ငါတို့ကအဲဒါကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုမချိုးဖောက်ချင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Apple Watch Orzly အတွက်ဖြစ်ရပ်.
ဒီကိစ္စအတွက် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့38mm နှင့် 42mm နှစ်မျိုးလုံးတွင် silicone ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည် အလွန်ပါးလွှာသည် ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ပတ်နာရီရဲ့ဗေဒကိုမချိုးပါဘူး။ ၎င်းသည် TPU ထက် ပို၍ ပျော့ပျောင်းသည် နေရာချရန်အလွန်လွယ်ကူသည်.
သိုင်းကြိုးကိုဖယ်ရှားပြီးထည့်သွင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဘယ်မှာဘက်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုနှင့်ဘေးထွက်ခလုတ်ကိုဒါဆိုဘာမှမလုပ်ဘဲပြီးပြည့်စုံသွားမှာပါ။ ငါ့အိမ်ပုံတွေမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ လက်အိတ်လိုပဲ နာရီ ဘေးဘက်ခလုတ်ကိုဖုံးအုပ်ထားပြီး Digital Crown ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုခွင့်ပေးသည် အဖုံးမရှိတဲ့အလားသင်ကိုင်တွယ်နိုင်တယ်
Apple Watch အတွက် Orzly Case
La Apple Watch Orzly အတွက်ဖြစ်ရပ်
လည်း မိုက်ခရိုဖုန်းကနေစပီကာကိုလုံးဝအခမဲ့ နှင့်သင်တန်း, နာရီကိုမဖယ်ဘဲနာရီကိုသွင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ၎င်း၏ထိတွေ့မှုသည် Apple Watch ၏အားကစားကြိုးနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် ပြီးတော့အဖုံးဖွင့်ပြီးလက်ပတ်နာရီကိုသင်၏လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်တင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်ဘာမှမဝတ်ထားဟုခံစားရသည်။ အကယ်၍ သိုင်းကြိုးကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်မလိုအပ်ပါ။
ငါဝယ်ခဲ့တဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအဖုံးနဲ့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာယူရိုသုံးခုလောက်ပဲထုတ်ခဲ့တယ်။ စျေးပေါပေမယ့်တစ် ဦး "အပြည့်အဝ။ " ဒီအစားငါ့ကိုနှစ်ခုယူရိုကုန်ကျခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံတွေမှာမင်းကိုအနက်ရောင်ကိုငါပြခဲ့လို့ငါလက်ရှိဝတ်ဆင်ပြီးကတည်းကငါထားခဲ့တာ အားကစား Band အနက်ရောင် သို့သော်အထုပ်တွင်အရောင်ငါးမျိုး (အနက်၊ အဖြူ၊ အပြာ၊ အစိမ်းနှင့်အနီရောင်) တွင်အဖုံးငါးခုပါ ၀ င်သည်။
အနက်ရောင်၊ အဖြူ၊ အပြာ၊ အစိမ်းနှင့်အနီရောင် ၅ မျိုးဖြင့် Apple Watch အတွက်အဖုံးများပါရှိသည်
စျေးနှုန်းက 9,99 € စုစုပေါင်း (အမှုတစ်ခုစီသည်ယူရို ၂ ဖြင့်ကျသင့်သည်) ပါဝင်ပြီးသေးငယ်သောကင်မရာများပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်နာရီကိုပျက်စီးစေခြင်းမရှိဘဲသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။
ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပါတယ် အမေဇုံ ထိပ်တန်း ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့အတူငါကထိပ်ဆုံးကိုရောက်လို့ငါကုန်ကျစရိတ်ကိုမပေးခဲ့ဘူး၊ နောက်တစ်နေ့မှာ Seur ကရောက်ခဲ့တယ်။
ရရှိနိုင်ပါသည် 38mm Apple Watch အတွက်ဖြစ်သည်
(အရာငါရှိသည်သောအရာကိုသင်တို့ကိုငါသင်ပေးသောအရာကို) နှင့် 42mm Apple Watch အတွက်ဖြစ်သည်
(ကျွန်ုပ်၏တည်းဖြတ်သူဖာနှင့်မန်နူးလ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည်) နှစ် ဦး စလုံးသည်ယူရို ၉.၉၉ ဈေးနှုန်းနှင့်တူညီကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏နာရီကိုဒီဇိုင်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအကာအကွယ်ပြုလုပ်လိုပါကကိုယ်တိုင်နှင့်အတွေ့အကြုံမှဤအဖုံးများကိုအကြံပြုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » သင့်ရဲ့ Apple Watch ကိုကြီးကျယ်တဲ့အမှုတစ်ခုနှင့်အတူကာကွယ်ပါ
Apple Watch အတွက်ဝှက်ထားသောဘက်ထရီနှင့် Deluxe dock